Noely COVID : Tena tsy nisy toa azy tokoa va re? · Global Voices teny Malagasy
Erantany ny COVID, saingy nitohy ny_herisetra tany amin'ireo firenena mahantra
Voadika ny 30 Desambra 2020 18:05 GMT
Ny Lord Arsevekan'i Canterbury, Justin Welby. Sary ofisialy avy amin'i Roger Harris, CC BY 3.0
Nosoratan'i Ian Inkster
Mazava tsara izao — tsy tapitra ho an'ny Noely ny COVID-19. Raha ny nisy, ny fisiany sy ny tanjany dia samy nihafaingana, niaraka tamina fahitàna endrika vaovao matanjaka kokoa sy mora miparitaka kokoa. Ny harivan'ny Noely, tafakatra ho 80.257.970 raha 522.664 no isan'ireo tranga hita, iray amin'ireo isana tranga isanandro avo indrindra hatramin'ny Febroary. Tafakatra ho 1.757.249 raha 8.621 no isan'ny maty. Ity tarehimarika farany ity no be indrindra noho ny isan'ny maty tao Etazonia, Angletera ary Frantsa nandritra ny Ady Lehibe Fararoa rehefa atambatra. Ao amin'ilay firenena be kristiana indrindra, Etazonia, tafakatra ho 149.049 ireo tranga, manodidina ny 50 isanjato amin'ny isan'ireo Amerikàna tra-pahavoazana mandrapifaran'ny Ady Lehibe Faharoa.
Tsy nanakana ny hanoanana sy ny herisetra ny Noely. Tany amin'ireo firenena mahantra no nisy fahafatesana betsaka indrindra hatramin'ny 1945. Marina ihany koa io ho an'ny Ady Lehibe Faharoa (1937-45). Tamin'ireny taona ireny, betsaka ny olona maty vokatry ny ady na noho ny mosary na ny aretina tany Shina sy Rosia raha ampitahaina amin'ny fitambaran'ny tany amin'ny faritra sisa teto ambonin'ny tany—hatreto. Raha ny taonjato faha-20 manontolo no raisintsika, mety nisy hatramin'ny 180 tapitrisa ireo olona maty noho ny ady nanerana izao tontolo izao. Saingy tsy azontsika vinavinaina ireo fahavoazana ankolaka nentin'ny ady, ireo izay nateraky ny mosary, ny fiantraikany na noho ny aretina. Saiky nandalo Noely daholo ireny ady sy fahafatesana tsy nisy fieritreretana ireny.
Tao amin'ny Fotoampivavahana ny Alahady 27 Desambra, ny Arsevekan'i Canterbury, Justin Welby, mpitarika ny fiangonana ao Angletera, dia nilaza ity Noely ity ho “Noely iray tsy nisy toa azy.” Inona no mety ho tiany nambara? Na tany amin'ireo katedraly lehibe indrindra aza, ireo kristiana anglikàna dia azo antoka fa nahatsapa hoe nankalazaina erantany ny andron'ny Noely, tany amin'ireo faritra miaina ny finoana kristiana, ary tany amin'ireo kolontsana tsy kristiana sy ireo izay miezaka ny ho velona tsy mila velively ny fanampian'ireo finoana neken'ny maro.
Saika nanerana ny tany mihitsy no notsidihan'ny COVID, eny fa na i Sahara Andrefana zara fa misy olona aza dia nahitàna tranga 10 sy fahafatesana iray. Nefa any amin'ireo firenena mahantra, nitohy toy ny mahazatra ny fahatongavan'ny herisetra ataon'olombelona. Anatin'ireo olona an-tapitrisa mandrafitra ireo mahantra indrindra amin'ny mahantra, matetika eny amin'ny sisintany manasaraka ireo tany midadasika, na toy ireo lazaina amin'ny hoe mponina ambanin'ny tany tsy misy mpahita sy “fihariana kely ka tsy hitan'ny toekaren”ireo tanandehibe”, britanika foana ny Noely. Any amin'ny toerana tahaka ireny, mivezivezy tsy hita maso ny COVID-19.
Nifantoka tamin'ireo firenena mahantra ao Azia, Afrika, Amerika Atsimo ary Eorôpa Atsinanana ny herisetra nataona fanjakana tamina fanjakana hafa. Hatramin'ny Ady Lehibe Faharoa, nisy ireo fifandirana nisongadina feno rà nandriaka nanomboka talohany sy nitohy ny andron'ny Noely tany amin'ireo faritra mahantra samihafa, mazana natao na notohanan'ny fitondrana kristiàna, namonoana tamin'ny alàlan'ny herin'ny afo, na ny hanoanana ireo olona kristiana, jiosy, hindoa, miozolmàna ary bodista, tsy manantsiny ny ankamaroany, tahaka ireo olondehibe rehetra tamin'ilay nahaterahan'ny kristiana tany ampiandohana. Azontsika tenenina ireo firenena 36 niatrika ny adin'ny Helodrano (Golfa) 1990.91, na i Afganistàna tamin'ny Oktôbra 2001.
Tsy mahagaga raha hatry ny elabe ireo mpandinika erantany no milaza hoe tsy noho ny tsy fahaizantsika mamokatra sakafo ampy hamelomana olona 7,5 miliara akory ny mosary misy eto an-tany. Misy idiran'ny tsy fahavononantsika hizara sakafo ho an'ireo tena mila izany fatratra. Tsy noho ny fankahalan'ny olompirenena tsotra avy any Etazonia, na Eorôpa,na Aostralia, Japàna, Kanadà, na Taiwan na Shina, na ireo firenena madinika, firenena mpanankarena vaovao ao Afovoany Atsinanana.
Kanefa, io dia vokatry ny herisetra tsy manjarin'ny pôlitika nataon'ireo mpitondra tany amin'ny firenena tahàka izany, sy ny tsy fahafenoan'ny fahefana, ny maha-olombelona na ny fanerena ataon'ireo fikambanana iraisampirenena toy ny Firenena Mikambana. Ny ady no manakana ny fivezivezen'ny sakafo sy fanafody, hatramin'ny fanampiana na ny eny an-tsena, ary ireo olompirenena any amin'ireo firenena lazaina fa demaokratika izay tsy mitsahatra ny mamela ny hisian'izany. Tsy nahaova na inona na inona ireo vavaka natao tamin'ny Noely, fa tamin'ny ady izy ireny no nisy fiantraikany fa tsy tamin'ny COVID-19. Saingy, raha ankehitriny azon'ny fahavononana siantifika mikatsaka zavatra maoderina atao ny misakana ny COVID-19, tsy vitan'ny fanirian'ireo kristiana kosa ny mibahana ny hetahetam-pandravana sy ady.
Tany aloha ela tany, nanoratra tantara an-tsary malaza miresaka antontanisa i Francis Galton (1822-1911), lahatsoratra iray nomeny lohateny hoe “Momba ny Fahombiazan'ny Vavaka.” Tsy mbola nisy nahasongona azy aloha hatramin'izao. Notsindriany fa raha tena marina tokoa fa misy ny andriamanitra lehibe sy mahery arahan'ny kristiana, izay mamaly ny vavaka ataon'ireo mpiankohoka aminy [sic], dia azo antoka fa ry zareo no tena iantefan'ireo vavaka tahàka izany, ny Fianakavian'ny Mpanjaka, ireo mpitarika fivavahana sy mpikambana anatin'ireo kaomity mpanao asa soa no tokony hahazo ireny faniriana sy fangatahana am-bavaka mba ho ela velona sy ho sambatra ireny. Kanefa, nasehon'ny fanadihadiana fa tsy ela velona noho ireo mpisolovava na mpivarotra andevo ireo mpitarika fivavahana sy ny fianakavian'ny mpanjaka, ka hatraiza araka izany no mety hahomby ny vavaka?
Manana labôtaroara tsara kokoa noho ny an'i Galton isika izao — ny Global COVID Lab. Tsy dia misy lanjany loatra ao izay herin'ny famindrampon'ny Noely.
Raha mety mankalaza Noely noho ny antony maro samihafa isika, “araka izay tsara indrindra vitantsika” (fomba fitenin'ireo pôlitisiana-ntsika), aoka isika tsy ho latsaka ao anatin'ny lokalokan'ingahy arseveka—ho an'ny tontolontsika sy ny finoantsika azy, tsy “Noely tsy nisy toa azy ity”. Ho an'olona an-tapitrisany, toy ny hafa rehetra efa nolalovantsika ihany io – nangirifiry, indraindray maharikoriko, indraindray mahafaty.
Araka izany, ho an'ireo Londôniana izay nanatrika ny fotoampivavahana tamin'ny Noely tao anatin'ny fepetra tena henjana, na ho an'ireo an-tapitrisa izay nankalaza ny fotoana tamin'ny fomba virtoaly, ho an'ireo rehetra nifampizara fanomezana tsra fono sy ireo karatra Noely tsara haingo, dia mety ho azoko ekena ny hoe “Noely tsy nisy toa azy” iny. Fa ho an'ireo an-tapitrisa maro, toa toy ny nahazatra hatrizay ihany no nankalazany ny Noely. Tsy foana ny hanoanana, ny herisetra, ny valanaretina COVID-19.
Profesora Ian Inkster dia mpahay tantaran'izao tontolo izao no sady mpahay toekarena pôlitika avy ao amin'ny oniversite SOAS, Londona, nampianatra sy nanao fikarohanatany amin'ireo oniversite britnika, aostraliàna, japoney ary tany Taiwan. Nanoratra boky miisa 13 izy momba ny fihetsiketsehan'ny tao Azia sy manerantany ka nifantohany manokana ny fandrosoana indostrialy sy teknolojika, ary izy no nanonta ny boky “Tantaran'ny Teknolojia hatramin'ny 2000″. Boky mbola ho avoakany ny “Distraction Capitalism: The World Since 1971″, sy ny “Invasive Technology and Indigenous Frontiers. Case Studies of Accelerated Change in History, with David Pretel”. Zohio ao amin'ny Twitter amin'n'ny tontolontsika sy ny finoantsika, tsy toy ny nahazatra ihany ve ity Noely ity?ny @inksterian